XOG: Mooshin looga horjeedo maamulka JUBBA ee AXMED MADOOBE oo ka socda MUQDISHO !! - Caasimada Online
Home Warar XOG: Mooshin looga horjeedo maamulka JUBBA ee AXMED MADOOBE oo ka socda...
XOG: Mooshin looga horjeedo maamulka JUBBA ee AXMED MADOOBE oo ka socda MUQDISHO !!
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo shalay uun ahayd markii uu madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya taageeray, soona dhoweeyay dhismaha Baarlamaanka Jubba ee muranku ka taagan yahay ayaa xildhibaanno ku sugan magaalada Muqdisho waxay shaaciyeen inay wadaan diyaarinta mooshin looga horjeeda maamulka Axmed Madoobe ee Jubba, arrintaasina ay iska arkeen guddoonka Baarlamaanka iyo guddigooda.
Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Baarlamaanka Soomaaliya Daahir Aamiin Jeesoow ayaa sheegay in xildhibaano kamida Baarlamaanka ay wadaan mooshin ka dhan ah Maamulka Jubba, mooshinkaas ayaa salka ku haya inay ku xadgudbeen dastuurka dalka isla markaana aysan Aqoonsaneyn Dowladda Dhexe ee Dalka ka jirta oo kaalintii ay ku lahyad maamulkaasi ay diideen.
Waxaana jira ayuu yiri inuu jiro mooshin talo soo jeedin, lix qodob oo dastuurka ka mid ahna uu jebiyay Axmed Madoobe.